#BIM - Hydrosanitary usoro iji Revit MEP - Geofumadas
#BIM - Sistemụ eji eji mmiri arụ ọrụ na-eji Revit MEP
Mụta iji REVIT MEP maka imewe Ntinye.
Nabata na usoro a Idebe ihe ọcha na Revit MEP.
You ga - achị site na nyocha ruo na atụmatụ nke atụmatụ.
Will ga - eji ihe ndị a na - ahụkarị, ezigbo ụlọ obibi nke ọkwa 4.
M ga-eduzi gị ụkwụ na ụkwụ, agaghị m eche na ịmara ihe ọ bụla Revit, ma ọ bụ ihe Sanya.
Ọ bụrụ na ị kwara ụta ma ọ bụ ihe ị tụrụ anya ya, ị nwere ike ịrịọ maka nloghachi gị.
Ọ ga-aga n'ihu na-eto eto ka oge na-aga, na-agbakwunye ndozi na mmelite.
IHE: Ihe di n'ime YouTubeỌ na - akuziri gị otu esi eji mmemme ahụ mana ọ ghazigharịrị na amabeghị iwu ma ọ bụ atụmatụ njirisi. Mara otu esi eji MR M EGO ọ maghị Mmiri, ma ọ bụ alaka ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ dị ka eletriki ma ọ bụ usoro. A na m akpọ gị oku ka ị chọpụta n'onwe gị.
N'ebe a, ị ga - amụta iji ngwaọrụ ndị dị mkpa iji mepụta sangbọ elu hydrosanitary maka ọrụ ụlọ ọ bụla. Ọdịnaya nke a N'ezie nwere ike nkewa n'ime dị iche iche ngalaba, nke ọ bụla n'ime onye na-amalite ihe dị mkpa ogbo nke imeputa hydrosanitary:
Nkọwa nke ọdịnaya:
Oyi na mmiri na-ekpo ọkụ na Revit MEP.
Modul mbu nke usoro ihe omume BIM na Revit: Nrụnye Sanitary.
N’ebe a, ị ga-amụta iji ngwa ndị dị mkpa iji malite oru n’ime Revitibu ezinụlọ ahụ ike ma mepụta sistemụ mmiri na mmiri oyi. Ga-amụtakwa iji onwe gị usoro ndị a site na ngwaọrụ ịgbakọ ihe mmemme ahụ nyere.
Nkebi nke mbu - Okwu mmalite na ngwaọrụ:
Mụta ibulite ụkpụrụ owuwu na ihe eji arụ ụlọ.
Nkebi nke abụọ - Sistemụ Pipe:
Mụta iji aka na jikọọ ọkpọkọ na akpaghị aka.
Nkebi nke atọ - Mmiri ọkụ na dayameta:
Mụta itinye mmiri ọkụ ma gbakọọ dayameta na akpaghị aka.
Drapaage na Ventilation na Revit MEP.
Modul nke Abụọ nke usoro ihe omume BIM na Revit: Nrụnye Sanitary.
N'ebe a, ị ga - amụta iji ngwaọrụ ndị dị mkpa iji mepụta sistemu mmiri na ikuku, gụnyere ihe ndị dị mkpa dị ka siphons. Na mgbakwunye, ị ga-enwe ike imepụta ekeputa nke imewe iji rụọ ọrụ arụmọrụ na ụlọ ngwa ngwa.
Nkebi nke mbu - Drains:
Mụta itinye ebe nsị na ịmepụta usoro nsị
Nkebi nke abụọ - Siphons:
Mụta idezi ezinụlọ na nnabata nnabata dị n’etiti sistemụ.
Nkebi nke atọ - Ihe o mere:
Mụta imepụta ihe mgbe ị na-arụ ụlọ ma ọ bụ osisi ihe atụ.
Nkebi nke Anọ - Venti:
Mụta imepụta oghere iji jikọta ha na sistem mmiri.
Ihe omumu ihe eji eme mmiri.
Modul nke ato nke usoro ihe omume BIM na Revit: Nrụnye Sanitary.
N'ebe a, ị ga - amụta ibu ma ọ bụ ihe nlereanya paịlị, autoclaves, tankị, ndekọ, teptik, ọnya griiz ihe ndi ozo hydrosanitary n'ụzọ dị iche iche
Akụkụ nke mbụ - Akụkụ Nweta:
Mụta iji bọmbụ na tankị. Mụtakwa iji gosipụta olulu mmiri.
Nkebi nke Abụọ - Ihe Nchịkọta:
Mụta i modelomi ihe ndekọ na ọnya griiz n'ụzọ dị iche iche.
Ejiri Revit MEP mepụta atụmatụ.
Moodu nke Anọ nke usoro ihe omume BIM na Revit: Nrụnye Sanitary.
N'ebe a, ị ga - amụta imepụta aha, oku, ngalaba, tebụl, nkọwa na ihe ndị ọzọ dị mkpa maka ngosi nke sangbọ elu hydrosanitary nke oru ngo obula.
Nkebi mbu - Atụmatụ, aha akwụkwọ na oku:
Mụta itinye akara na ọkpọkọ na ngwaọrụ, tinye ndetu teknụzụ ma jiri akpịrịkpa dị iche iche rụọ ọrụ n'otu ụgbọ elu ahụ.
Nkebi nke abụọ - Tebụl, Ngalaba na nkọwa:
Mụta iji tebụl ọnụọgụ ndị mejupụtara ihe ndị ahụ wee bubata nkọwa ndị dị mkpa site na isi mmalite dị iche iche.
IHE: Ekepụtara usoro a site na ụdị 2018. 99% nke ọdịnaya ahụ ka bụ otu, agbanyeghị na-enyocha nzukọ mkparịta ụka maka mgbanwe ọ bụla dị mkpa.
Nweta ikikere nwata akwukwo Revit
Mwube oru na Revit
Mepụta, megharia ma gbanwee usoro nchekwa mmiri
na ọtụtụ ihe ndị ọzọ!
A na-atụ aro inweta ihe ọmụma bụ eziokwu nke Revit, mana ọ dịghị mkpa.
A na-atụ aro maka ịmara maka nrụnye ihe ọcha, ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa.
Injinia ma ọ bụ Aka Ndị Ọrụ
Mmụta injinia ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ
Ndị na-akụ ọkpọkọ
Ndị ahịa na ndị na-emepụta akụkụ
Ọzụzụ a dịkwa na Spanish
Usoro BIM Ọmụmụ BIM Electromechanics
Previous Post«Previous #LAND - Civil Course 3D maka ọrụ obodo - Ọkwa 1
Next Post #GIS - Geolocation Course for Android - na-eji html5 na Google MapsNext »